Desktọpụ Ntụgharị vesos Online MKV Ntụgharị
> Resource> Video> Desktọpụ vs Online MKV Ntụgharị
Ị na na verge nke inye elu mgbe na ọtụtụ okpu mgbalị converting gị MKV video faịlụ? Ọ bụ ezie na ihe MKV faịlụ dị yiri nnọọ ka nke AVI, ọ na-akwado ụfọdụ nke ọhụrụ na-ewu ewu codec dị ka AAC, H.264 na Vorbis. Otú ọ dị, ọ bụ adịghị mfe na-abịa gafee a ọkpụkpọ na bụ dakọtara maka playbacks. Ya mere, ọ bụ n'ezie nnọọ akụda mmụọ. Ikekwe ị pụrụ ịnwale ngwọta na m na chọpụtara; Method 1: Site online MKV Ntụgharị ma ọ bụ; Method 2: Desktọpụ Ntụgharị.
Usoro 1: Online MKV Ntụgharị
The free online video Ntụgharị n'okpuru atọghata gị MKV video faịlụ online mfe na conveniently. Ọ na-akwado na ghotara gị MKV faịlụ maka ihe bugoo. Niile i nwere ime bụ mbubata gị video faịlụ site na mpaghara gị ndekọ, setịpụrụ mmepụta format, jupụta na gị adreesị email gị na mgbe ahụ na-amalite iji tọghata.
Nke na-akwado mmepụta formats, ị nwere ike họrọ iji tọghata gị MKV video faịlụ na MP4, AVI, FLV, WMV, MOV (n'ihi na playbacks on iDevices) ma ọ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ dabere na gị mmasị nke playbacks. Otú ọ dị, na-agba nke akakabarede bụ nke ukwuu dabere na gị njikọ Ịntanetị. Ndị ọzọ karịa nke ahụ, ị ​​ga-enweghị ọtụtụ ụlọ dezie ma ọ bụ ịgbanwe gị video si ntọala. N'ihi ya, ọ bụrụ na ị na-achọ ihe nhọrọ, lelee Method 2.
Nnukwu ihe dị iche n'etiti ihe online na desktọọpụ Ntụgharị bụ na ị na-adịghị ibudata ma ọ bụ wụnye ihe ọ bụla ihe mbu nhọrọ, ebe ị ga-mkpa maka mgbe e mesịrị. Na gbakwunyere n'akụkụ, ị ga-amara atụmatụ juru n'ọnụ ke a desktọọpụ Ntụgharị na akakabarede ọsọ ga-emetụta site njikọ Ịntanetị. Ị pụrụ nanị kwụ n'ahịrị gị faịlụ na Wondershare Video Ntụgharị Ultimate na mgbe ahụ na-agba ọsọ gị errands-enweghị na-echegbu onwe ha banyere àgwà ma ọ bụ ụgwọ na-anọdụ ala na-eche n'ihu gị PC iji hụ na gị video faịlụ na-ekwesị converted.
Nzọụkwụ abuana ke converting gị MKV video faịlụ ndị dị ka n'ụzọ kwụ ọtọ dị ka otú ị ga-ejikarị na-agba ọsọ na site na ya na Method 1. nnọọ na-agụ site na ndu n'okpuru maka nkọwa ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 1: Direct akakabarede
Dị nnọọ ịdọrọ-na-dobe gị faịlụ na na interface ozugbo usoro ihe omume e oru. The Wondershare Video Converter Ultimate akwado ma na usoro ogbe akakabarede, ya ka ị ghara-enwe nchegbu banyere otú ọtụtụ faịlụ ị nwere ike tọghata oge ọ bụla.
Họrọ mmepụta Format,
Ikpebi na gị mmepụta nchekwa,
Nzọụkwụ 2: ukpụhọde tupu akakabarede
Yiri Nzọụkwụ 1, bulite gị video faịlụ na mgbe ahụ na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Pịa Dezie dezie gị videos,
Pịa na Ntọala bụrụ na ị chọrọ n'ihu mgbanwe,
Nzọụkwụ 3: Tọghatara obere ngwaọrụ
Ị na-adịghị ka nchegbu banyere ihe bụ ihe kasị mma ọnọdụ na ị ga mkpa iji nyefee ma playback gị video faịlụ gị obere ngwaọrụ. Ndị kasị mma ntọala ama na e preset n'ime Video Converter Ultimate gị mma.
Na-ahọpụta gị mmepụta Format, dị nnọọ họrọ gị oke nke ngwaọrụ ma site ika aha na nlereanya ndị dị otú ahụ dị ka e gosiri n'okpuru.
Olee otú iji tọghata MKV ka SWF
Olee otú iji tọghata MKV ka VOB
Olee otú Download na tọghata Video Mfe
Olee otú dezie H.264 Files